Daawo: Howlihii garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo si caadi ah kusoo laabtay iyo Diyaaradii oo garoonka Laga qaaday - Hablaha Media Network
Daawo: Howlihii garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo si caadi ah kusoo laabtay iyo Diyaaradii oo garoonka Laga qaaday
HMN:- Waxaa si caadi ah ku soo laabtay howlihii ka socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kadib markii ay hakad ku jireen muddo saacado ah.
Diyaaradii ku burburtay wadada diyaaradaha adeegsadaan ayaa laga qaaday goobta, waxaana ka qeyb qaatay qaaditaanka burburka diyaarada Wiishash, sida ay Jowhar.com u sheegeen masuuliyiin goobta ku sugan.
Maareeyaha Hay’adda Saadaasha hawada Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay in diyaarada ay kasoo duushay garoonka diyaaradaha ee Entebe ee dalka Uganda, waxaana ay waday Cargo, sida uu hadalka u dhigay.
Burburka diyaaradda ay leedahay Shirkada Bancraft ayaa saameeyay wadada ay ku dagaan diyaaradaha, waxayna sababtay in muddo saacado ah wax diyaarad ah kasoo dagin garoonka.
Diyaaradda ayaa shilka gashay kadib markii ay lugaha u bixi waayeen, waxaana diyaarada qeyb ka aheyd diyaaradaha caawiya howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka socdo.
Masuuliyiinta garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in hadda xaalada ay caadi kusoo noqotay islamarkaana dib ay u bilowdeen howlihii garoonka ka socday.
Diyaarado badan oo imaan lahaa magaalada Muqdisho ayaa hakad la geliyay muddo seddex saacadood ah, sida uu sheegay maareeyaha hay’adda saadaasha hawada.